कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन : रुट परिवर्तनको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
कात्तिक २१, धरान । कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन (हाइटेन्शन) को रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएको छ । प्रसारण लाइनले धरानको वडा नम्बर २० को मानव बस्ती, बाटो, विद्यालय, वन र पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने भन्दै स्थानीयवासीहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले आयोजनाको रुट परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयले हालेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
३ महीनाअघि स्थानीय प्रेमकुमार राई, ओमकुमार राई र मंगलसिंह तामाङले उत्प्रेषणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसयता विष्णुपादुका क्षेत्रमा आयोजनाको टावर निर्माणको काम ठप्प थियो । सर्वोच्चले मंगलवार रिट निवेदन खारेज गरिदिए पनि एक पटक स्थानीयवासीसँग पुनः छलफल र समन्वय गरेर काम अघि बढाइने आयोजनाका साइट इन्जिनियर मुकुन्द पराजुलीले बताए ।
धरानको वडा नं २० क्षेत्रमा १४ ओटा टावर निर्माण हुनेछ । त्यसमध्ये ५ ओटा टावर निर्माण भईसकेको छ भने ९ ओटाको फाउण्डेशनकै काम पनि बाँकी छ । प्रदेश नं १ को पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको बिद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा कोशी कोरिडोर २२० केभी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
तिब्बतले दियो प्रदेश १ लाई रू. ७ करोडको स्वास्थ्य सामग्री[२०७७ जेठ, २०]
आफ्नै नागरिक फिर्ता लान पश्चिमबंगाल राजी भएन : १५ हजार भारतीय अलपत्र [२०७७ जेठ, १९]
तीब्बत सरकारले प्रदेश १ लाई दियो ७ करोडको स्वास्थ्य सामग्री [२०७७ जेठ, १९]
सर्दु कोरिडोरको काम अघि बढाइँदै[२०७७ जेठ, १८]
धनकुटाका पत्रकारको कोरोना बीमा[२०७७ जेठ, १८]
तिब्बतले दियो प्रदेश १ लाई रू. ७ करोडको स्वास्थ्य सामग्री